Qatar ma waxay bixisay lacagtii madax furashada abid ugu badnayd dunida? - BBC News Somali
Subaxnimadii 16-kii bishii Disembar sannadii 2015-kii qoyska ka arrimiyo dalka Qatar waxay heleen war aan lagu farxin, 28 xubnood oo kamid ah qoyska oo falal ugaarsi waday ayaa lagu afduubtay gudaha dalka Ciraaq.
Magacyada dadka laga afduubtay Qatar waxaa loo geeyay Maxamed bin Cabdulraxmaan Al-Thani oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda Qatar, wuxuuna ogaaday in dadka la afduubtay ay kamid yihiin 2 qof oo qaraabadiisa ah.
Wuxuu durbadiiba fariin qoraal ah kula xiriiray safiirka Qatar u fadhiya dalka Ciraaq oo u wax ka weyddiyay dhacdada lagu afduubtay 28-da qof ee dalka Qatar u dhashay.
Qatar waxay madax furasho u bixinaysaa lacago balaayin ah sii loo soo daayo shakhsiyaadka qoyska ka tirsan ee Ciraaq lagu afduubtay, balse lacagtan ayaa laga yaaba inay ku dhici karto gacanta kooxa Mareykanka uu ku tilmaamay argagixiso.
Marka si kale loo eego, Qatar ma hayso lacago ay gacanta ku dhigaan kooxo argagixiso ah balse waxay ku wareejin doontaa dowladda Ciraaq si loo soo daayo ragga afduuban.
Marka arrimahaasi laga soo tego, lacagata ay kusoo furanayso Qatar raggan waxay ku dirtay bangiga dhexe ee dalka Ciraaq halkaaso weli lacagta ay taallo, inkastoo aanan war laga haynin goobta lagu haysto raggan.
Wasiirka arrimaha dibadda Qatar iyo safiirka ayaa farriimo iyo cod is weedaarsanaya sii loo sameeyo wadaxaajoodka lagu soo daaynaya la haystayaasha.
Warbixinta waxaa helay koox mucaarad ku ah dowladda una sii gudbiyay Qatar, kaddibna BBC-da ayaa loo soo dusiyay.
Su'aasha lais weddinaya waxay tahay, Qatar ma waxay bixisay lacagtii madax furashadii ugu badnayd taarikhda?
Sheikh Maxamed wuxuu ahaan jiray khabiir dhanka dhaqaalaha ah, waxay qarabo dhaw yihiin Amiirka dalkaasi, lamana ogayn xilligii loo magacabaay inuu noqdo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi isagoo jira 35 sanno.
Dadka la afduubtay waxaa kamid ahaa qaraabada wasiirka arrimaha dibadda Qatar Maxmed bin Cabdulraxmaan
Markii afduubka loo gaysanayay muwaadiininta reer Qatar, safiirka Qatar u fadhiya Ciraaq Zayed Al-khayareen wuxuu jiray da'da 50 sanno, waana safirkii ugu horreeyay ee Qatar u fadhiya dalka Ciraaq muddo 27 sanno ah balse jagadan sidaasi muhiim ugama ah Qatar.
Wadxaajoodka lagu soo furanaya ragga lagu afduubtay Ciraaq waxaa loo adeegsanaya in sare loogu qaado jagadiisa.
28-da qof ee Qatar u dhashay waxaa gudaha Ciraaq lagu afduubtay iyagoo Galayr ka u gaarsanaya dhul ku yaalla koonfurta Ciraaq oo shimibrtan Galayrka laga helo. Galayrka ayaa aad looga jecel yahay qoyska reer Boqor. waxaana lagu iibsada qiimo aad u sareeyo.
Nooca Galayrka oo laga helo dalka Ciraaq ayaa qaali ka ah dalalka Khaliijka
Toddobaadyo xanuun badan kaddib, dowladda Qatar wax war ah kama aysan haynin afduubka, balse bishii Marso ee sannadkii 2106-kii ayay ogaadeen in kooxaha wax afduubtay ay kasoo jeedaan garab kamid ah maleeshiyaadka Ciraaq oo ay taageerto dowladda Iiraan.
Kooxda waxay sheegeen inay doonayaan lacago madax furasho ah, Safiirka Qatar u fadhiya Ciraaq Khayareeen ayaa farriin ka helay wasiirka arrimaha dibadda Sheikh Maxamed.
Wuxuuna farriinta ku yiri " waxaan ku yiri 14 kamid ah dadkeena inoo soo daaya, qayb kamid ah lacagta madax fursahada ayaan idiin siinaynaa"
Shan maalmood kaddib kooxda waxay shegeen inay soo daaynayaan saddex kamid ah ragga ay afduubteen.
Labo maalmood kaddib safiirka Qatar wuxuu gaaray aagga caggaaran ee magaalada Baqdaad iyadoo ay waarddiyaynayaan laamaha ammaanka Ciraaq, goobtan waxaa ku yaalla xafisyada dowladda iyo safaaradaha dalalka shisheeye.
Goobta waxaa ka jirtay xiisad kaddib markii tageerayaasha waddaadka shiicada Muqtada Sadar ay dibadbaxyo ka wadeen afaafka hore ee xarunta aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad, shaqaalaha safaaradda goobta ay ka carareen, wadaxaajoodka uu safiirka kusoo daayn rabay ragga la faduubtay waxaa saameeyay dibadbaxa.
Khayareen wuxuu sugay dadkii matalayay kooxaha wax afduubtay balse ma jirin ballan qaad lagu soo daynayo raggan.
Wuxuu soo qoray farriintan "Waa markii saddexaad aan tego magaalad Baqdaad sii loo soo daayo ragga nagala afduubtay,aad ayaan u walwalsanahay, mana doonayo inaan soo tago anigo ku guulaysanin soo daynta 28-da qof ay la haysto"
Kooxdii waxay diideen inay soo daayan ragga balse waxay safiirka siiyeen aalad ay ku jiraan muuqallada dadka ay haystaan.
Waxay ugu baaqeen safiirka inuusan cid kale la wadaagi muuqalladaasi.
wuxuuna sheegay safiirka inuusan la wadaagaynin muuqaallada qoyska maadama ay ka walaacsan yihiin afduubka loo gaystay.
Kataib Hezbollah oo wadaxajoodka u matalayay kooxda afduubka gaysatay ayaa wasiirka arrimaha dibadda Qatar ka codsaday 10 milyan oo doolar sii loo soo daayo ragga.
Safiirka Qatar ee Ciraaq waxaa dadaalka wadaxaajoodka u waday labo qof oo Ciraaq u dhashay oo sunniyiin ah, waxay booqasho ugu tageen wasiirka arrimaha dibadda Qatar, waxayna ka codsadeen lacago horumaris oo gaaraya $150,000 iyo shan kamid ah saacadaha ugu qaalisan dunida.
Bishii April sannadkii 2016-kii waxaa meesha soo galay Jeneraal Iiraan u dhashay oo la yiraahdo Qaasim Sulaymaani .
Jeneraal Qaasim Sulaymaani oo ku sugan magaalada Tehraan sannadkii 2016-kii
Safiirka ayaa farriin qoraal ah usoo qoray wasiirka arrimaha dibadda Qatar wuxuu ku yiri" Janaraal Sulaymaani wuxuu la kulmay kooxda afduubka gaysatay waxayna ku cadaadiyeen inuu bixiyo 1 bilyan oo doolar.
Bishii Januray ee sannadkii 2017-kii waxaa laisla gaaray in Qatar ay bixiso 1 bilyan oo dooolar iyo 150 milyan oo doolar.
Saraakiisha Qatar waxay aqbaleen inay jirto farriimaha lais weedaarsaday balse waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in waxyaabo aan jirin meesha lagu daray.
Dabayaaqadii bishii April ee sannadkii 2107-ka waxaa lasoo afjaray dadaallada lagu soo daaynayo muwaadiniintii Qatar ee Ciraaq lagu afduubtay.
Diyaaradda Qatar ayaa lacagta madax furashada gaysay magaalada Baqdaad, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda Qatar inkaastoo maamulka shirakadda Qatar ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintani.
Shirkadda diyaaradaha Qatar oo la sheegay inay lacagta madax furashada qaaday
Su'aasha lais weeyddinaya ayaa ah yaa helay lacagtii la geeyay Baqdaad? balse waxaa la sheegay in in kabadan 1 bilyan oo doolar iyo 150 milyan oo doolar ay ku wajahnaayeen maleeshiyaadka afduubka gaystay oo ay taageerto Iiraan.
Saraakiisha dalka Qatar waxay sheegeen in lacagtaas sidaasi u badan loo diray dowladda Ciraaq balse aysan gacanta ku dhigin kooxaha argagixisada, waxayna ku sheegeen in bixinta lacagtan looga gollahaa iskaashiga dhanka ammaanka la haystayaasha islamarkaasna dowladda Ciraaq ay mas'uuliyad ka saarnayd badbaadinta muwaadiniinta reer Qatar ay afduubka lagu haystay.
21-kii bishii April sannadkii 2017-kii waxaa xoriyaddooda dib u helay muwaadiniintii Qatar u dhashay ee Ciraaq lagu haystay. sidaa uu ku warrramay safiirka Qatar u fadhiyay Ciraaq.
Lix iyo tobban bilood kaddib, 28-dii qof ee xoriyaddooda dib u helay ayaa lagu arkay iyagoo faraxsan waddo ku taalla agagaarka garoonka diyaaradaha ee Dooxa.
Dhacdada anfariirka ku ridday madaxweynaha Faransiiska